बालुवाटारमा सिके राउत र विप्लवबारे शीर्षनेतावीच छलफल ! के भयो त कुरा ? - Samachar PatiSamachar Pati
बालुवाटारमा सिके राउत र विप्लवबारे शीर्षनेतावीच छलफल ! के भयो त कुरा ?
काठमाडौं, ३० फागुन । विप्लव समूहलाई प्रतिवन्ध लगाइएको विषयमा नेकपाका शीर्षनेताहरुले नै प्रश्न उठाइरहेका बेला बिहीबार अध्यक्षसहित ५ शीर्षनेताको बैठक प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको छ ।
मौन अवधिको ख्याल नगरे एक लाख जरिवाना तिर्नुपर्ला, उम्मेदवारी रद्द होला !
‘राजीनामाबारे पार्टी बैठकमा कुनै प्रश्न नै उठेको छैन’: राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा